RASMI: SIDDEEDDA Ciyaartoy Ee Ku Tartamaya Abaal-marinta Xiddiga Sannadka Ee Premier League Oo La Shaaciyey & Sadio Mane Iyo Ronaldo Oo Laga Reebay - GOOL24.NET
RASMI: SIDDEEDDA Ciyaartoy Ee Ku Tartamaya Abaal-marinta Xiddiga Sannadka Ee Premier League Oo La Shaaciyey & Sadio Mane Iyo Ronaldo Oo Laga Reebay
Sadio Mane iyo Cristiano Ronaldo ayaa laga reebay liiska ciyaartoyda ku tartamaya abaal-marinta xiddigaha Sannadka ee Premier League Player of the Season oo hadda lasoo saaray siddeed ciyaartoy oo ku kala calaf-qaadi doona.
Taageereyaasha kubadda cagta ayaa falcelin degdeg ah ka sameeyey qaabka xulashada iyo go’aan gaadhista ee sababta looga dhigay, in Sadio Mane iyo Cristiano Ronaldo ay ka maqnaadaan liiska ciyaaryahannada ku tartamaya abaal-marinta xiddiga Premier League ee sannadka.
Labadan ciyaartoy oo bandhig cajiib ah ka sameeyey garoomada, ayaa si lama filaan ah looga dhex-waayey liiska siddeed ciyaartoy oo ay ku jiraan laacibiin kale oo ay aad uga waxqabad badnaayeen.
Mane ayaa Liverpool u dhaliyey 15 gool 33 ciyaarood oo hroyaalka Premier League ah oo uu saftay, waxaana uu ahaa xiddigii ay kooxdiisu ku baxsanaysay kulamadii ugu dambeeyey, halka uu sidoo kalena tartanka Champions League uu ku hoggaamiyey inay finalka tagaan.
Cristiano Ronaldo ayaa isaguna ahaa xiddiga Manchester United, waxaanu u dhaliyey 18 gool 30 kulan oo uu u saftay, waxaana uu laba jeer xilli ciyaareedkan socda ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha ee horyaalka Premier League.
Siddeedda xiddig ee loosoo xulay inay ku tartamaan abaal-marinta xiddiga bisha ayaa waxa hoggaaminaya Mohamed Salah, Kevin De Bruyne iyo Trent Alexander-Arnold, waxaana sidoo kale qayb ka ah Bukayo Saka, James Ward-Prowse, Joao Cancelo, Son Heung-min iyo Jarrod Bowen.
Taageereyaasha kubadda cagta ayaa u codayn doona illaa Isniinta ciyaartoyga ay la tahay inuu ugu fiican yahay, ugu dambayntana waxa go’aanka gaadhi doona kabtannada 20ka kooxood ee Premier League iyo guddi khubaro ah oo isla go’aamin doona xiddiga ku guuleysanaya abaal-marinta.
De Bruyne iyo Salah ayaa min hal mar oo hore kusoo guuleystay, waxaanay rajaynayaan in ay mar labaad hantiyi doonaan abaal-marintan, iyadoo xiddiga Man City uu laba sannadood ka hor qaatay halka uu garabka weerarka Liverpool qaatay abaal-marintan sannadkii 2018.
Kubbad-sameeyaha reer Belgium oo tiir-dhexaad u ahaa Man City ayaa waxa uu kooxdiisa u dhaliyey afar gool Arbacadii, waxaanay hadda qarka u saaran yihiin inay horyaalkoodii afraad ku guuleystaan shan sannadood gudahood.
Salah ayaa isaguna 34 kulan oo Premier League ah dhaliyey 22 gool, kuna daray 13 caawimood, halka Trent Alexander-Arnold uu isaguna caawiyey 12 gool oo horyaalka Premier League ah, laba kalena uu isagu saxeexay.